Ny mpampiasa sasany dia mitaraina fa miolakolaka ny fijoroan'ny iMac M1 | Avy amin'ny mac aho
Ny mpampiasa sasany dia mitaraina fa miolakolaka ny fijoroan'ny iMac M1
Ireo karazana tsy fahombiazana ireo dia tsy fahita any Apple ary izany ve na ny seranan-tsambo fampidirana aza dia voondro mazava ka ny zavatra rehetra dia mifandrindra. Amin'ity lafiny ity, taona vitsivitsy lasa izay dia tadidiko fa nisy ny fitarainana momba ny mpampitohy USB C an'ny fitaovana Android sasany raha oharina amin'ny Apple's Lightning amin'ny iPhoneo, ity farany dia nifantoka tanteraka ary ny hafa kosa tsy.
Eny ary Toa ny iMac vaovao miaraka amin'ny M1 no manana ny fanohanana somary miolakolaka Ary mahatonga ny solosainanao hiseho eo amin'ny efijery somary miolakolaka. Amin'ny MacRumors mamerina YouTuber iray antsoina hoe iPhonedo sy fitarainana isan-karazany ao amin'ny Apple Support Communities na ao amin'ny Reddit ry zareo.
Ity fironana amin'ny fanohanana ity dia mahatonga ny efijery ho somary miolakolaka saingy tena sarobidy tokoa raha tsy jerenao. IMac miaraka amin'ny M1 afaka manana fiovana 1mm eo amin'ny andaniny roa na ireo fitaovan'ny santionany avy amin'ny tranokala MacRumors aza dia manana fiolahana ity, satria manazava izy ireo taorian'ny fiheveran'ilay mpaka sary azy ireo fa ilay latabatra noboarina.
Tena kely dia kely izany ary raha ny fahitana azy dia tsy voamarika izany, saingy mazava ho azy fa io karazana kilema io dia tsy tokony handalo ny sivana na ny fenitra kalitao ananan'ny orinasa toa an'i Apple araka ny voalazan'izy ireo. Tsy mazava izahay fa hiverina i Apple noho io tsy fahombiazana io ary amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nisy tranga maro loatra na dia toa misy aza izy ireo. Ho hitantsika ny fivoarany ary raha misy ny fanamboarana na fanamboarana fandaharam-potoana dia hizara izany amintsika rehetra eto isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Ny mpampiasa sasany dia mitaraina fa miolakolaka ny fijoroan'ny iMac M1
Fahadisoana iray hafa ihany koa, manana kitendry nomerika roa aho ary samy miondrika amin'ny antsasany ...
Ny Beats Studio Buds dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fanafoanana ny tabataba mavitrika sy ny fahaleovan-tena 5 ora